Waxaan dib u dhis ku sameynay kala saraynta boggaga dhowr ka mid ah macaamiishayada WordPress, mid ka mid ah waxyaabaha aan isku dayeyno inaan sameyno waa abaabulka macluumaadka si hufan. Si tan loo sameeyo, waxaan inta badan dooneynaa inaan abuurno bog master ah oo aan ku darno liis si otomaatig ah u liis garanaya dhammaan bogagga ka hooseeya. Liistada bogagga carruurta, ama bogagga hoose. Nasiib darrose, ma jiraan wax hawl ah ama muuqaal ah oo tan lagaga dhex samaynayo WordPress, sidaa darteed waxaan soo saarnay a Liistada Liistada WordPress gaaban si loogu daro macaamiisha mawduucooda faylka function.php.
aclass - Haddii aad jeclaan lahayd inaad ku dalbato fasal liiskaaga aan la xakamaynin, halkan ku qor.
Intaa waxaa sii dheer, haddii aad jeclaan lahayd a qoraal kooban oo sharraxaya bog kasta, qalabku wuxuu awood u siinayaa qaybo ka mid ah bogagga si aad wax uga beddeli karto waxyaabaha ku jira bogga boggiisa.